R/wasaaraha Sudan ayaa diiday in la isku xiro in laga saaro liiska argagixisada iyo xiriirka Israel… – Hagaag.com
R/wasaaraha Sudan ayaa diiday in la isku xiro in laga saaro liiska argagixisada iyo xiriirka Israel…
Posted on 27 Seteembar 2020 by Admin in World // 0 Comments
Ra’iisul wasaaraha Sudan Cabdalla Hamdok ayaa Sabtidii sheegay in Sudan aysan dooneyn in la isku xiro ka saarista dalka liiska argagixisada ee Mareykanku ku daray oo ah arrin hortaagan helitaanka maalgalin shisheeye ee dhaqaalaha dalkaasi, iyo in la caadiyeeyo xiriirkeeda Israel.
Liiska Sudan u aqoonsanaya in ay ka mid tahay dalalka taageerada siiya argagixisada ayaa soo bilowday waqtigii uu dalkaasi ka talinayay kaligii taliyihii xilka laga tuuray Cumar al-Bashir, waxaana ka mid ahaanshaha liiska ay adkaysay in dowladda cusub ee ku meel gaarka ah ay si deg deg ah u hesho kaalmo deyn cafin ah iyo maalgalin shisheeye.
“Mowduucan (xiriirka Israel) waxa uu u baahan yahay dood qoto dheer oo bulshada dhexdeeda ah,” ayuu Ra’iisul wasaaruhu ka sheegay shir looga hadlayay dib u habeynta dhaqaalaha oo ka dhacay Khartuum.
Sicir bararka sii kordhaya ee dalka Sudan iyo lacagta oo hoos u sii dhaceysa ayaa ah caqabadaha ugu weyn ee heysta maamulka KMG ee Hamdok, oo talada la wadaaga militariga tan iyo markii xukunka laga eryay Bashiir.
Burhan iyo Ra’iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa horraantii sanadkan kulan lama filaan ah ku yeeshay dalka Uganda. Haddana, yagleelidda xiriir lala yeesho Israel ayaa ah mid xasaasi ah, maadaama ay Sudan cadow weyn ku ahayd Israel xilligii Bashiir uu talada hayay.